Boqorkii Daroogada, Pablo Escobar | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Cumar Maxamed — September 23, 2020
Pablo Escobar! Darooga iibiyihii adduunka ugu awooda badnaa, taajirkii nacaska ahaa, dambiilihii dadkiisu jeclaayeen iyo hoggaamiyihii Medallin.
Hadaba waa kuma PAPLO ESCOBAR?
Pablo Emilio Escobar Gaviria, waa mid kamid ah dambiilayaasha adduunka soo maray kooda ugu weynaa, uguna halista badnaa, Pablo waxa uu ku dhashay magaalada Rionegro ee dalka Colombia. Waxuuna dhashay 1-dii Diseembar sanadkii 1949, kadib dhalashada Escobar qoyskiisu waxa ay usoo wareegeen caasimada Medallin, degmaada Envigado ee isla dalkaasi Colombia.
Xilligii yaraantiisa Paplo Escobar waxa uu bilaabay falal tuug iyo burcadnima isugu jiraan sida inuu xadi jiray qalabyo casri ah qiimana kufadhiya asagoo sidoo kale ka qeyb qaadan jiray falal lagu dhacaayo gaadiidka qeybihiisa kala duwan sida mootooyin-ka, baaburada iyo wixii lamidka ah.
Hadaba markii Colombia ay aad ugu soobateen warshadaha soo saara kuna ganacsada xashiishka siiba nooca loo yaqaan (Cocaine), oo ah mid kamida daroogooyinka aadka u halista badan, asalkeeduna kasoo maaxatay wadamada dariska la ah Colombia sida Peru, Ecuador iyo wadanka Bolivia kuwaasoo sabab u ahaa in ganacsiga kookeynta uu soo gaaro wadanka Colombia, waxa ayna sababtay in Pablo uu kamid noqodo mid kamid ah dhalinyarta fududeysa gudbiska daroogooyinka iyo iskuxirka labada dhinac ee kala iibsaneyso kontorobaan-ka daroogada casriga ah ee kookeynta. Escobar waxa uu isaga haray waxbarshada heerka jaamacad asagoo yar waxa uuna bilaabay in uu u go’o ganacsiga kookeynta.
Dhexdhexaadkii 70-tanmeeyadii, waxa ay aheyd xilligii Pablo uu aasaasay warshad uu ugu magacdaray markii danbe Medallin Cartel taasoo noqotay warshada ugu weyn ee soo saarta kookeynta. Waxa ay warshadiisu laheed beer lagu beero kookeynta oo kufadhisay dhul baaxadiisu aad uweyneed.
Xilligaasi Pablo waxa uu heshiis ganacsi dhanka kookeynta kula jiray dhiggiisa Ochoa Brothers oo kala ahaayeen: Juan David, Jorge Luis iyo Fabio kuwaasoo ka caawin jiray hab u socodka ganacsiga aanan qasaarada laheyn ee kookeynta. Escobar waxa uu ahaa madaxa shirkadiisa taasoo xooga saari jirtay gudbinta, iibinta iyo soo saarista badeecada halista ah ee kookeynta.
Pablo warshadiisa waxa ay noqotay warshadii ugu horeesay ee ganacsiga kookeynta gaarsiisa wadanka Mareekanka, asagoo bil walbe si qarsoodi ah ku galin jiray Mareykanka kookeyn xadigeedu gaareysa 70-tan ilaa iyo 80-tan TAN. Intii lagu guda jiray billaawgii 80-tanmeeyadii Warshada Medallin Cartel waxa ay noqotay mida ugu horeysa, uguna xoogan dhanka kookeynta, taasoo Paplo Escobar kadhigtay mid kamid taajiriinta aduunka halka xadiga lacagtiisu lagu qayaasay $25-billion.
Waxa uuna kagalay kaalinta 7aad tobanka qof ee ugu taajirsan adduunka qiimeyntii ay sameysay majaladda caanka ah ee Forbes, waxa uuna kasoo muuqday liiska bilyaneerada ee soo saarto majaladda caanka ee Forbes 7 sanno oo xariir ah.
Pablo waxa uu hirgeliyay mashruucyo sida inuu dhisay garoomo ciyaaro ah asagoo sidoo kalana ku caawin jiray lacag aad u farabadan dadka faqiiriinta ah, taasina waxa ay sababtay in Pablo Escobar loogu magac daro lana siiyo neenaasta Robin Hood oo micnaheedu tahay ‘qofka lacagta dadka taajiriinta ah kadhaco si uu ugu deeqo masaakiinta.
Waxaa siyaaday jaceylka dadka taagta daran ay u qaadeen Escobar taasoo ka saaciday in sanadii 1982 Pablo kamid noqdo xubin katirsan xildhibaanada dalka Colombia kaasoo u xil saarnaa mashruucyada dhisida garoomada kubada cagta iyo taakuleynta dadka faqriga ah waxa uuna qeyb ka ahaa xisbigii Luis Carlos Galan ee lagu magacaabi jiray Liberal Alternative Movements.
Ka dib labo sanno uu xilka haayay dowlada Mareykanka oo kaashaneysa dowlada Colombia ayaa dhinac kaga soo wada jeesatay siyaasada Escobar iyo qadiyadiisa uu rabay in uu u tartamo xilka madaxweynenimo ee dalka Colmbia, wasiirka caddaalada Colombia Rodrigo Lara ayaa cambaareyn iyo mooshin xil ka qaadis ah ka diyaariyay Escobar taasoo dhalisay in Paplo uu waayay booska xildhibaannimo uu u haayay dalkiisa Colombia.
Isla sanadkii 1984-tii Pablo waxa uu dil qorsheysan ku dilay wasiir Rodrigo oo ka dambeeyay xil kaqaadistiisa.
Pablo wanaagii uu qabtay intii uu xilka haayay ma aysan ka caawinin inuu kudaboolo wajigiisa labaad, Paplo Escobar waxaa uu lahaa halkudhig uu kuleyn jiray xubnaha katirsan dowlada iyo dhigiisa kula xifaaltama ganacsiga kookeynta taasoo aheyd “Plata o Plomo” oo lamicno ah “Macdan (Laaluush) ama Hogaan (Xabad)”. Taasi waxaa u dheeereyd dagaal ba’an uu kula jiray warshada ay xifaaltamaan Cali Cartel tasoo kula tartami jirtay ganacsiga daroogooyinka. Dhibanayaasha Pablo uu aadka u leyn jiray waxaa kamid ahaa xubnaha dowlada u shaqeeya, booliska iyo shacab dulman oo kudhamaan jiray falalka argagaxisnimo uu ku kici jiray Pablo.
Pablo Escobar waxaa lagu naanneesi jiray “Boqorka kookeynka”. Pablo Escobar waa dambiilaha ugu taajirsan taariikhda, wuxuu uruursaday qiyaastii $ 30 bilyan oo doollar waqtiga dhimashadiisa.
Dhammaadkii sideetanmeeyada sanadii 1989 Escobar ayaa walxaha qarxa ka buuxiyay diyaarada loo yaqaan Avianca Flight 203 taasoo ay ugu tala galeen in ay ku qarxiyaan musharaxa u taagnaa qabashada xilka madaxweynenimo ee dalka Colombia ee lagu magacaabay César Gaviria Trujillo.
Pablo asbaabihii uu Cesar qaraxa ula beegsaday ayaa kamid aheyd in Cesar uu watay sharci heer caalami ah oo lagu u gaarsanayo dhammaan ganacsatada daroogooyinka eena u madax banaanyihiin CIA-du inay diirada saaraan kooxaha kashaqeysta muqadaraadka.
Nasiib wanaag Cesar waa uu ka badbaaday iskudaygii Escobar waxa uuna ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee dalka Colombia asagoo noqday madaxeynihii 28aaad ee Colombia waxa uuna xilka haayay laga soo bilaabo sanadii1990-kii ilaa iyo 1994.
Escobar dagaalkii uu kala jiray ganacsatada ay ku xifaaltamaan ganacsiga kookeynta waliba meelaha lagu dagaalaayay ee u horeesay dalka Mareykanka oo tartan adag ay ugu jireen warshadaha ka ganacsada kookeynta ayaa saameyn weyn ku noqotay dalka Mareykanka taasoo dhalisay in Ameerikaanku ay bartilmaameed ka dhigtaan sidii ay usoo qaban lahaayeen amase u dili lahaayeen madaxda kookeynta uu u horeeyo Pablo Escobar.
Escobar waxa uu aad u nebcaa dabagalka Mareykanka ay ku haayeen asagoo yiri “Waxa aan ka jeclahay inaan qabri ku yeesho Colombia intii aan ku yeelan lahaa qol xabsi Mareykanka”. Dabagal dheer ay ku haayeen dabi baarayaasha dunida iyo kuwa Colombia ayaa dhalisay in sanadkii 1991-dii ay heshiis isku afgarteen Pablo Escobar iyo dowlada Colombia in uu isa soo dhiibo Pablo. Wada hadaladii ay ku heshiiyeen Escobar iyo dowlada Colombia waxaa kamid ahaa in Escobar lagu xiro xabsi uu asaga naqshadeeyay ee la oran jiray La Catedral.
La Catedral waxa uu u naqshadeeyay Pablo sida inuu dhisayo qasri, waxa uu u yeelay club lagu tunto, garoon kubad iyo goobo lagu baashaalo, waxaa u dheeraa in xabsigu yaalay taleefanno kombiyuutaro iyo fax mashiino, qolka Pablo ku xirnaa wax kamaqnaa ma aysan jirin waxa uuna kulahaa qolka dhexdiisa xafiis uu ku maamuli jiray ganacsigiisa daroogada.
Pablo waxa uu awood ku heestay xabsiga uu gacantiisa ku naqshadeeyay ilaa markii dambe uu xabsiga dhexdiisa ku jirdilay, naftana ka gaqaaday labo xubin oo katirsaneed shaqaalaha warshadiisa, waxaana go’aan adag kasoo baxay dowlada Colombia oo go’aamisay in ay Pablo u wareejiso xabsi ka sharci adag kii hore uu Pablo katalinayay, intii lagu guda jira soo wareejintiisii Pablo waxaa uu ka baxsaday xabsigii uu asaga naqshadeeyay sanadii 1992, waxayna dowlada Colombia iyo CIA-duba kuraad joogeen soo qabashada Pablo.
Escobar waxaa laweysanaa 1 sanno oo xariir ah, intii lagu guda jiray raadintiisii waxaa la sheegay in uu gubay lacag gaareyso $2 milyan si uu ugu kululeeyo gabadhiisa oo dhaxamooneesay qabow jira awgeed. Kadib sanad ladaba joogay Pablo Escobar ayaa waxaa lasoo ogaaday in Escobar uu wali dhex joogo magaalada Medallin, waxaana weerar kusoo qaaday Pablo Escobar ciidanka Colombia oo kaashanayay haayad sirdoon oo ay soo direen Mareykanka, isxabadeen dheer kadib Pablo waxaa madaxa ka toogtay askari katirsan booliska Colombia waxa uuna u dhintay dhiig madaxa kaga furmay awgii halka wargeysyada qaar ay qoreen in uu gacantiisa isku dilay.
Kadib dhimmashadii Pablo waxaa burburtay warshadii uu madaxda ka ahaa ee la oran jiray Medallin Cartel. Dhimmashadiisa waxa ay sababtay in dibad baxayaal aad u tira badan kasoo qeyb galaan kuwaasoo taageero u ahaa Pablo waxa ayna u badnaayeen masaakiintii uu caawin jiray.
Majalda Forbes ayaa waxa ay qortay in maantadan Pablo Escobar haddii uu noolaan lahaa uu noqon lahaa ninka ugu taajirsan adduunka asagoo kaalinta kaga heyn lahaa Jeff Boz farqi lacag gaareysa $20 bilyan oo dollar. Ilaa waqti xaadirkaan wali waxaa jira dad taageersan boqorkii dhanka daroogada abid ugu awooda badnaa ee Escobar, waxaana jira guryo qaar ay sawirada Pablo ku farshaxameysanyihiin.
Tags: Boqorkii DaroogadaPablo Escobar
Next post Maxaad Ka Taqanaa Cumar Al-Mukhtaar? - Libaaxii saxaraha
Previous post Hanti Qaran - Khubarada dalku waa Hanti Qaran